Casa del Lago - Chez Tete - I-Airbnb
Indlu yamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguMarcela
Ifumaneka kwiKhorido yoKhenketho, "iJoya de Los Lagos" iLago de Yojoa lelona chibi lininzi lendalo eHonduras. Lo mmandla wohlukeneyo webhayoloji uzisa indawo yokuphefumla ekhuselekileyo nezolileyo kubakhenkethi abadiniweyo abafuna ukunxibelelana nendalo kwindawo emangalisayo.
Xa ucela ukubhukisha, ngobubele zazise, uze usazise ngakumbi ngohambo lwakho.
Indlu yethu ibonelela ngeendawo zokuphumla ezipholileyo kwiintsapho okanye izihlobo, ezineembono ezintle zechibi. Ime endulini ngaphakathi kwemizuzu embalwa yokufikelela kuhola wendlela wasePanamerican.
Ungaphumla kwidesika ecaleni kwechibi lamanzi lentaba, ufunde incwadi, okanye uthathe uhambo lokunyuka intaba.
Indlu enkulu inamagumbi amabini okulala anokuhlala abantu aba-5. Ayiyondlu inkulu kodwa ikhululekile, kukho indawo yokutyela, ikhitshi; Ngaphandle kwendlu kukho idesika evulekileyo enamanqanaba amabini, enye ihleli kwizitulo zokuphumla kwaye enye inetafile ende yokutyela ecaleni kwechibi lamanzi asezintabeni (amanzi abandayo nahlaziyayo) **amanzi echibi aphuma entabeni - gcina loo nto engqondweni njengoko ayenzelwanga ngebleach, ngexesha lemvula inokufumana ubumdaka obungakumbi bendalo kodwa senza konke okusemandleni ukuba bufumaneke kuzo zonke iindwendwe zethu**
Kukho igumbi elongezelelweyo elincanyathiselwe kwikhabhathi enkulu enokuhlala ezinye iindwendwe ezi-5. - oku kuya kufumaneka ukuba itheko lakho likhulu kune-5.
4.51 out of 5 stars from 100 reviews
4.51 · Izimvo eziyi-100
Njengenxalenye yeendlela ezihamba phambili zabakhenkethi kweli lizwe, zininzi izinto ezinomtsalane ezijikeleze i-Yojoa Lake onokuthi uyenze phantsi komphunga wakho. Oku kuquka ukutyelela imiqolomba enomtsalane yaseTaulabé, apho unokungena nzulu kumqolomba omangalisayo ozele ngamatye athambileyo.
Abakhenkethi banokufikelela ngokulula kwiPaki yeNdalo kunye neArchaeological Park, apho iikhilomitha ezininzi zomzila zinxibelelana nebhodi eneekhilomitha ubude enwebeka ngaphaya kwemigxobhozo yechibi, inika iindwendwe ukufikelela okumangalisayo kuzo zonke iintlobo zezilwanyana zasendle ongayi kuba nethuba lokuzifumana. ukusondela. Ichibi ngokwalo linyakazela kubomi beentaka, obuthakazelelwa kakhulu kwisikhephe esibhexwayo okanye ukukhwela i-kayak ekuzeni kokusa, kunye nengxangxasi ekufuphi yasePulhapanzak kukuhamba ngemizuzu engama-30 kuphela; tyelela i-Cascade kwaye ukhwele emva kwamanzi agqumayo, i-zip-line kwihlathi elijikelezileyo, okanye uphumle kwaye uthathe idiphu emanzini ayo amatsha.
Ipropati yeyosapho; singabakho ukuze sikwamkele ngokobuqu, kuxhomekeke kwixesha lokufika kukho abagcini bepropathi kwisiza ukunceda ngayo nayiphi na imiba enokubakho okanye ukunxibelelana nathi.